Mpanamboatra Kayak - Mpamatsy Kayak any Sina
Kayak tokana amidy amidy
20% eo ho eo no maivana noho ny kayak mihodina.
Mitovy lanja amin'ny kayak Glassfiber.
Matanjaka kokoa noho ny kayak Glassfiber / KV / Carbon.
Ny takelaka mitambatra ABS voaisy tombo-kase amin'ny acrylic mahatohitra UV, afaka manamboatra ny faritra mamirapiratra izay tsy nananan'ny kayak rotational velively.
Kayak mitondra lakana tokana
Fampisehoana tena tsara:Ny fananganana polyethylene rotomolded 1-layer dia manome fitambarana tanjaka sy fanoherana ny fiatraikany izay tsy mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fitaovana hafa.
Volavola tsy manam-paharoa ： Rehefa namolavola ny SeaDog Angler dia tsy nisy ezaka tsy voavonjy tamin'ny famoronana fanjonoana jono 295cm / 9'8 '' sit-on-top jono, sady fanamafisana ny fampiononana sy fitoniana.
Kayak ny mpanjono voalohany
Ny backrest fampiasa mahazatra dia mampiavaka azy manokana. Tsy vitan'ny hoe manohana fanohanana ambony kokoa izy ary manatsara ny zava-bitan'ny paddling fa mora ihany koa ny mifamatotra.
Ity kayak polyethylene tsy mahazatra ity dia ankamamin'ny mpamaky sambo no mangetaheta mitady kayak rotomolded izay mahery, haingana, mailaka ary mahafinaritra. Tsy dia be loatra ny manodidina - ary ny Crunch koa dia mijery an'io.
Kayak Fanjonoana sambo plastika
Resaka fampisehoana daholo no jerena fa ny endrika ivelany ihany koa. Mbola mila mahita fipetrahana tsara kokoa 11'5 '' mipetraka amin'ny kayak manjono isika. Ny Raider Angler no mety ho sambo mahay manao asa sokajy tsara indrindra any an-tsena ankehitriny.
Kano Fiofanana momba ny jono olona roa
The Doubloon - maodely vaovao avy amin'i Jolly Roger! Ity kayak tandem matevina ity dia sady azo ampiharina no miorina amin'ny 510cm / 16'8 ”. Ny famolavolana ny vatam-borona dia hohavaozina na amin'ny fahombiazana na amin'ny fitoniana hahafahan'ny traikefa nahafinaritra sy azo antoka ho an'ny mpamono.
Toy ny hoe ny Raider paddlers milatsaka amin'ny endrik'ilay Buccaneer. Ny Buccaneer dia miavaka amin'ny rano. Amin'ny 14'9 '' / 450cm ity sambokely haingam-pandeha ity izay manana fahaiza-manao fitsangantsanganana miharihary dia tsy maintsy ananan'izay rehetra mitady kayak fialam-boly misy zavatra mihoatra ny mahazatra.